घरमा एक्लै हुँदा केटीहरुले यस्तो हर्कत गर्छन्, जुन सुन्दै अचम्म लाग्छ ! – Nepal Khabar
घरमा एक्लै हुँदा केटीहरुले यस्तो हर्कत गर्छन्, जुन सुन्दै अचम्म लाग्छ ! हामी घरमा अथवा कोठामा एक्लै भयौं भने के गर्छौं रु टिभी हेर्छौं, पार्टी गर्छौं अथवा मोजमस्तीका अन्य केही विकल्पहरु । तर केटीहरु घरमा एक्लै हुँदा के गर्छन् होला ?यस्ता छन् केही केटीका बारे रोचक तथ्यहरु जब घरका सदस्यहरु बाहिर जान्छन् या एक्लै हुन्छन् उनीहरु आफूलाई मिनी फेशनका रुपमा लिन्छन् । आफूले पछिल्लो समय किनेका नयाँ–नयाँ कपडाहरु लगाउँछन् । त्यो उनीहरुको परीक्षण हो ।
Tagged महिलाको बानी
बिहे नगरे पनि यौ’न आ’नन्द लिरहेकी छु: दिपाश्री निरौला (भिडियो)
रोमान्टिक यौ न कथा: अब अर्को पटक चाहिँ कसरी गर्ने भनेर सिकेर मात्र आउनु होला
एक सुन्दर जोडिको मार्मिक कथा मन थामेर नरोई पढ्नुहोस्, मन परे से’यर गर्नुहोस